ရွှေကြာ: March 2009
နမော တဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဿ
တရားရေအေး သောက်သုံးပြီးပြန်လည်ထွက်ခွါနိူင်ကြပါစေ .
ဗုဒ္ဓဘာသာ (သို့) သူတော်ကောင်းတရား
ဓါရဏပရိတ် ပါဠိတော်နှင့် အနက်
ပြဿနာရဲ့ အဖြေမှန်ဟာ အလင်းအားနဲ့အတူတူပါ။
ပြဿနာရဲ့ အဖြေမှန်ဟာ အလင်းအားနဲ့ အတူတူပါဘဲ ၊အလင်းအားကောင်းလေလေ အမှောင်ထုလွင့်ပြယ်ရလေလေ မဟုတ်ပါလား ။ အဖြေမှန်ရလာတာနဲ့အမျှ ထင်မြင်လွဲမှား မှုက ကြီးထွားလာနေကြတဲ့ အမုန်းတရား ၊ အာဃာတတရားတွေ အမြန်ဆုံး ကွယ်ပျောက်လွင့်ပြယ် ကုန်ကြရပြီး သူတို့ရဲ အောက်မှာ ငုပ်လျှိုးတိမ်မြုပ်နေခဲ့ကြရတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ မေတ္တာတွေ ပြန်လည်ရှင်သန်နိုးထ လာကြမှာ ဧကန်မုချ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပြဿနာနဲ့ကင်းတဲ့သူ ၊ ပြဿနာမရှိတဲ့သူဆိုတာ ဘယ်မှာရှိနိူင်ပါမှာလဲ ။ အသင်းအဖွဲ့ ၊ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း ၊ ဆွေမျိုးမိသားစု ၊ အသိုက်အမြုံတွေ ကြားမှာ ပေါ်လာရတဲ့ ပြဿနာတွေ ၊ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ လို့ဆိုသလို အထွေထွေ ဆိုကတည်းကိုက ကွဲပြားမှု မတူတာတွေ ရှိနေပြီ။ မတူညီခြင်းဟာ ပြဿနာရဲ့ အစ ၊ မတူညီကြလို့ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာဟာ သဘာဝတရားပေါ့ ။
သူတစ်ပါးမပါ မိမိ တဦးတယောက်တည်းမှာရော ပြဿနာက ကင်းနိူင်ရဲ့လား ၊ ဒွိဟ စိတ်နဲ့ အမြဲလိုလို ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါပဲ ။ ဒီကိစ္စငါလုပ်ရမယ် ၊ လုပ်ကို လုပ်မှဖြစ်မယ် ။ ဟာ ... ငါလုပ်လို့မဖြစ်သေးပါဘူးဟ ။ ငါဒီလိုလုပ်ချလိုက်ရင် ဟိုလို တွေဖြစ်မလာနိူင်ဘူးလား ။ အို ... ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ဖြစ်မှ ကိစ္စပြတ်သွားနိူင်တယ် ။ ........... စဉ်းစားလိုက်အုံးနော် ။ ကိစ္စပြတ်တယ်ဆိုတာလဲ ငါအခု စိတ်ထက်သန်နေတုံးဘဲ ပြောတဲ့ စကား ၊ တကယ်ပြတ် ဖို့ကျတော့ အပြောလွယ်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အငိုလွယ် အရှိုက်ခက်သတဲ့ ။
တခါတလေ အချိန်တွေပိုနေ အားနေလို့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ပျင်းနေရတဲ့ အချိန် ၊ တန်ဖိုးရှိရှိ အသုံးချဖို့ မလိုအပ်တဲ့ အချိန် ပိုကာလတွေ ရှိတတ်ကြတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ မိမိခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း ဆီကို သွားလည်ချင်တဲ့ ဆန္ဒပေါ်လာတယ် ။ သွားလည်လိုက်အုံးမယ်ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းက ရှိချင်မှ ရှိနေမှာ ၊ သွားမနေပါနဲ့လေ ။ မသွားတော့ဘူး ဆုံးဖြတ်ပြီးခါမှ စကားပြောချင်စိတ်က ပြန်ပေါ်လာပြန်တယ် ။ အပြင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ နေက ချစ်ချစ်တောက်ပူလို့ ။ ဟာ ..... သူမရှိလို့ ပြန်လာရရင် နေက ဒီလောက်ကြီး ပူနေတာ ။ အဲလိုမျိုး ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအဖွဲ ပြဿနာမျိုး တွေလေ ၊ အစားအသောက်နဲ့လည်း အဲဒီလို ပြဿနာလေးတွေ တတ်တတ်သေး တာဘဲ မဟုတ်လား ။ စားကလည်း စားချင် ကိုယ့်ရောဂါနဲ့ကလည်း မတည့် ၊ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဇွတ်စားမိလိုက်ပြီးမှ ရောဂါပဲ တိုးလာသလိုလို စိတ်ကဖြစ်လာ ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ် အလိုလိုက်ရကောင်းလားလို့ နှောင်တရလိုက် ၊ ဒေါသဖြစ်လိုက် နဲ့ ဒါတွေဟာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေရတဲ့ ပြဿနာ တွေပဲ မဟုတ်လား ။။။။။။။။။။။။။။။။
မိမိ သိပ်ကို ချစ်ခင်ပြီး သံယောဇဉ်ကြီးရတဲ့ မိသားစု ၊ မိတ်တွေ အကြားမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ကြေကွဲစရာ ခံပြင်းနာကြည်းပြီး တမြည့်မြည့်ခံစားရတဲ့ အထင်အမြင် လွဲမှားမှုပေါ်မှာ အပြစ်မြင်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေ ရှိလာတတ်ကြပါတယ် ။ ခိုင်မြဲတဲ့ သံယောဇဉ်အနှောင် အဖွဲ့တွေ အကျိုးပဲ့ ပြတ်တောက်သွားကြရတဲ့ အထိ ပြဿနာက တစ်စတစ်စ ပိုပိုကြီးထွားလာတတ်တယ် ။ အဖြေမှန်ကို မဖော်ထုတ်နိူင်သေး သရွေ့ သံယအပေါ် သံသယဆင့်ပြီး သေကုန်ကြတဲ့အထိ ဆက် စပ်မရ ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ သာဓကတွေ လောကကြီးမှာ အများကြီးရှိပြီးခဲ ကြပြီ ။ ဒါကြောင့် ပြဿနာစက်ကွင်း ထဲမှာပဲ ရှိနေကြတဲ့ လူသားအားလုံးက ဒီပြဿနာကို ချေဖျက်နိူင်ကြဖို့ ၊ ခွင့်လွှတ်နိူင်ကြဖို့ အသီးသီးတာဝန်ရှိကြတယ် ။ ကြိုးစားချေဖျက်ယူကြရပါလိမ့်မည် ။
ဒီပြဿနာ စက်ကွင်းထဲမှာ ပါဝင်နေကြသူ အားလုံးက သူတစ်ပါးအပြစ်ကို ချည်း ပုံကြီးချဲ့တွေး မနေဘဲ ၊ သူတစ်ပါးအပေါ်ကို ချည်း အပြစ်တွေ တရစပ်ပုံဖို့ မနေကြဘဲ " ငါကကော " ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးကို တွေးဖြစ်အောင် တွေးယူကြည့်လိုက်ပါ ။ ငါ့ရဲ့ ချို့ယွင်း ချက်နဲ့ မှားယွင်းမှုတွေ ကရော အခု ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ ပြဿနာထဲ မှာ အချိုးအစားအားဖြင့် ဘယ်လောက်ပါဝင်နေသလဲ ဆိုတဲ့ သုံးသပ်မှုမျိုး ကို မိမိကိုယ်မိမိ နှစ် ကိုယ်ခွဲပြီး သတ္တိရှိရှိ စစ်ဆေးသုံးသပ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ ။ အဲဒီလို မငဲ့ မညှာ သုံးသပ်မှုရဲ့ တန်ဖိုးကြီးမားမှု ကို လက်တွေ့ခံစားရပါလိမ်မယ် ။ စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်လည်း မမျှော်လင့်တဲ့ ပြဿနာ အကြီးငယ်တို့ ကို ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ ဘူးပြီးပြီ ။ စာဖတ်သူ များလည်း အသေးအဖွဲ သော ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ဖူးကြမှာပါ ။
ဥပမာ လေ့လာကြည့်ကြပါစို့ ...........
ချိန်ခွင့်တစ်ဖက်ပေါ်မှာ ထည့်ချိန်တဲ့ အလေးအချိန် သိလိုတဲ့ ပစ္စည်းရှိမယ် ၊။
ကျန်တစ်ဖက်ပေါ်မှာ တော့ အဆုံးအဖြတ်ပေးရမယ့် အလေးတွေ ရှိနေမယ် ။
မိမိတစ်ပါးသူ အပေါ် သံသယနဲ့ စွပ်စွဲထားချက်နဲ့ ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတဲ့ နာကြည်းနေရမှုက ( ပစ္စည်း )ဆိုပါစို့ ။ ကျန်တစ်ဖက်မှာက သံသယကို ချေဖျက်ဖို့ ၊အာဃတ ကို ပယ်နူတ်နိူင်ဖို့ (အလေး ) ။ မိမိ က အချိန်တိုင်းဖြည့်ဖို့နေလို့ (ပစ္စည်း)အာဃတအမုန်းတွေ ထည့်ထားတဲ့ ချိန်ခွင်ဘက်မှာ ချိန်ခွင်လျှာထွက်နေတာ ၊ အလေးသာနေတာက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ဟိုး.... အဆုံးထိစောင်းကျနေပြီနော် ။
အမှန်တရားဘက်မှာ ချိန်ခွင်လျှာ လုံးဝကို မရှိတော့ဘူး ။ အဲဒီလို တစ်ဖက်စောင်းနင်းကြီးဖြစ်နေစမ်းပါစေ ။ စောစောက ပြောခဲ့သလို မိမိ အပြစ် အားနည်းချက်ကို မငဲ့မညှာ သတ္တိရှိရှိ ရှာဖွေနိူင်ခဲ့လို့ မိမိ အပြစ် အားနည်းချက်ကို ဘွားခနဲ တွေ့လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ .... ။
မိမ်ိနေ့စဉ်စု ပြုံ ထည့်နေခဲ့တဲ့ ချိန်ခွင်ဘက်က (ပစ္စည်း) အာဃတ အမုန်းတွေ ကို ချိန်ခွင်ပေါ်ကနေ ဆွဲထုတ်ယူချလိုက်သလိုမျိုး ချိန်ခွင် လျှာဟာ အမှန်တရား (အလေး) တွေ ထည့်ထားတဲ့ဘက်ကို တစ်မု ဟုတ်ချင်းရောက်ချသွားပါလိမ့်မည် ။ မိမိရင်ထဲမှာ အာဃတနဲ့ အမုန်းတရား နာကြည်းခံပြင်းမှုတွေ ဟာလည်း ချိန်ခွင်ပေါ်မှာ ထည့်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဆွဲနုတ်ယူလိုက်သလို အမြန်ဆုံး ပျောက်ကွယ်ပေါ့ပါးသွားပြီး မိမိတစ်ပါးသူတွေ အပေါ်မှာ ထားရှိ စွပ်စွဲမိနေတဲ့ သံသယနဲ့ အမုန်းတရားတွေ အစား ချစ်ချစ်ခင်ခင် လုံးလုံးထွေးထွေး ယုယု ယယ ရှိနေခဲ့ကြစဉ် အနစ်နာ ခံခဲ့ကြပုံတွေ ၊ ကြင်နာခဲ့ကြပုံတွေ ။ စည်းရုံးခဲ့ကြပုံတွေ စတဲ့စတဲ့ ပုံရိပ်တွေ အလျှင်အမြန်ထင်ဟပ်လာပြီး သံယောဇဉ်တွေ ပြန်လည်ရှင်သန် လာကြပါလိမ့်မည်ဆိုတာ ရဲရဲ ကြီး ယုံကြည်လိုက်စမ်းပါ ။
နောက်တခု အဖြေထုတ်ကြစို့အုံး ...................
အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ လူငါးယောက် တိတ်ိရှိကြမယ် ၊ အဲဒီလူငါးယောက်ထဲကမှ လူတစ်ယောက်ကို ဒီအခန်းထဲမှာ လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါသလဲ လို့ ရေတွက်ခိုင်းပြီ ဆိုပါတော့ ။ ရေတွက်သူက ( တစ် ၊ နှစ် ၊ သုံး၊ လေး ) ဆိုပြီး စိတ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပါးစပ်နဲ့ အသံထွက်ပြီး ဖြစ်ဖြစ် ရေတွက်ပြီဆိုပါတော့ ။ ဒီအဖြေ မှန်ပါရဲလား ။ ဒီအခန်းထဲမှာ ရှိနေကြတဲ့ လူက ငါးယောက်မဟုတ်ပါလား ။ ဒီငါးယောက်ထဲက ဘယ်သူကိုဘဲ ရေတွက်ခိုင်းရေတွက်ခိုင်း (တစ် ၊နှစ် ၊ သုံး၊ လေး ) ဆိုတဲ့ အဖြေသာ ရရှိနေ သရွေ့ အဖြေမှားပဲ ဖြစ်နေမှာပါပဲ ။
တစ်ယောက် က (တစ် ၊ နှစ် ၊ သုံး ၊လေး၊ ငါး ) ရယ်လို့ အဖြေထွက်အောင် ရေတွက်ပြနိူင်မှ သာ တိကျမှန်ကန်တဲ့ အဖြေမှန်ကို ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ အဲဒါကြောင့်လဲ တစ် ၊ နှစ် ၊ သုံး ၊ လေး ဆိုတဲ့ အဖြေကို ရနေသူတွေ ဟာ ဒီထဲမှာ သူ့ ကိုယ်သူ ထည့်မရေတွက်ကြဘဲ ကျန်လူတွေကိုသာ လက်ညိုးထိုး အသားပေးရေတွက်နေခဲ့ကြလို့ပဲ မဟုတ်ပါလား ။ ....... တစ်၊ နှစ် ၊ သုံး ၊ လေး၊ ငါး ဆိုတဲ့ အဖြေမှန် ကို ရရှိသူက ဒီအခန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ၊ ပါဝင်နေတဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ပါထည့်သွင်းရေတွက်နိူင်ခဲ့လို့ မှန်ကန်တိကျတဲ့ အဖြေကို ရရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ စာရေးသူက အဓိက တင်ပြချင်တဲအကြောင်းက အဲဒါပါ ။ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်လာတဲ့ အခါမှာ မိမိပါ ဒီပြဿနာစက်ကွင်းထဲမှာရှိနေ ၊ ပါနေ ခဲ့မယ်ဆိုရင် မိမိဟာ ဘယ်ထောင့် ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေသလဲ ၊။ မိမိရဲ့ မှားယွင်းမှု ၊ ချို့ယွင်းချက် ၊ ပြုမှားမိတဲ့ အမှားတွေ ၊ ဘယ်အချိုးအစားနဲ့ ဒီပြဿနာပေါ်လာစေဖို့ ပါဝင်နေခဲ့ သလဲဆိုတာကို မိမိကိုယ်မိမိ ခွင့်မလွှတ်ဘဲ ၊ လျှောမတွက်ဘဲ သတ္တိရှိရှိ ထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်လို့ ။
ပြဿနာရဲ့ အဖြေမှန်ဟာ အလင်းအားနဲ့ အတူတူပါပဲ ။ အလင်းအားကောင်းလေလေ ၊ အမှောင်ထုလွင့်ပြယ်ရလေလေ မဟုတ်ပါလား ။ အဖြေမှန်ရလာတာနဲ့အမျှ ထင်မြင်လွဲမှားမှုက ကြီးထွားလာနေကြတဲ့ အမုန်းတရား ၊ အာဃတရားတွေ အမြန်ဆုံး ကွယ်ပျောက်လွင့်ပြယ်ကုန်ကြရပြီး သူတို့ရဲ့ အောက်မှာ ငုပ်လျိုးတိမ်မြုပ်နေခဲ့ကြရတဲ့ အဖြူရောင် စစ်စစ် မေတ္တာတရားတွေ ဟာ ပြန်လည်ရှင်သန် နိူးထ လာကြမှာ ဧကန်မုချဖြစ်ပါတယ် ။ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ အဖိုးထိုိက်ရတနာတွေဆိုတာ ဘယ်အချိန် ၊ ဘယ်ကာလမှာပဲ ပြန်တွေ့တွေ့ တန်ဖိုး နိမ့်ကျမသွားပါဘူး ။
မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း ၊ ဆွေကောင်း မျိုးကောင်းတွေ ဆုံးရှုံးကြရတာဟာ ရတနာပစ္စည်းဆုံးရတာထက် နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားပါတယ် ။
အဆွေခင်ပွန်းကောင်းတွေ မဆုံးရှုံးကြရအောင် အဖြေမှန်ကို ရှာကြပါ ။ မိမိကိုယ်မိမိ ဘယ်တော့မှ အပြစ်ထဲက ဖယ်မတွေးပါနဲ့ ထပ်ဆင့် သတိပေးရင်း ... စာရေးသူလည်း ကြိုးစားနေဆဲပါလို့ ..
ရေးသူ ရွှေကြာ အချိန် 3/10/2009 05:39:00 AM 1 ဓမ္မဒါန
လာရောက်လည်ပတ်သူများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ရွှင်လန်းကြပါစေ .
လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ ။ အထင်သေးခြင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ ။ ဆင်းရဲလိုခြင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။ (တိပိဋက မင်းကွန်းဆရာတော်)
တစ်မိပေါက် တစ်ယောက်ထွန်ပေါ် ပညာကျော်က ပေါက်ဖေါ်မိသား ၊ ကုန်ကျော်ကြား ၏ ။
တစ်ပါးထေရ်မော် ၊ ပညာကျော်က ၊ ကျောင်းပျော်အများ ၊ ကုန်ကျော်ကြား၏ ။
အချိန်နှင့် ဒီရေသည် လူ ကို မစောင့် အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ သုံးချနိုင်ကြပါစေ။
ခြေရာလေး တော့ ထားခဲ့စေချင်ပါတယ်
သတင်းဘလော့ဂါများ ထားဝယ်သား ဆုံဆည်းရာ နစ်နေမန်း ပေါက်ကရာလေး ရောင်နီဦး
ဘလော့ဂါများ အရှင်ကောဝိဒ အရှင်အဂ္ဂဓမ္မ Buddhist.college အရှင်ကုမာရ အရှင်မြန်မာ ထ.၀,ယဉ်ငေးရိပ်သာ သုခရိပ် ဥပသကာ ရွှေကြာအင်း hyujung ငြိမ်းအေး တနင်္သာရီသား မော်ဒန် ကဗျာ ဆုရည် မနိူင်းနိူင်းစနေ မသက်ဇင် ချမ်းမြ မိုးမခ HelpdDesk ပြည့်စုံ ချယ်ရီချို ဖိုးဇင် မယ်လိုဒီမောင်
**သတိလမ်း ပြင်နေပါသည်** ဒါန ဆိုတာ ဘေးရန် ကွာဖို့ ယတြာ အလုပ် မဟုတ်ပါ။ သီလ ဆိုတာ လာဘ်မိုးရွာဖို့ ဂါထာ အလုပ် မဟုတ်ပါ။ ဒါန သီလ ထို ဓမ္မကို မူလအရင်းမြစ် ပညာဖြစ်အောင် ၀ိဇ္ဇာဥာဏ် အမြင်သန်မှ အမှန်ရမည် ဥာဏ်မတည်က ကံသည် အလုပ် လွဲတော့မယ်၊ ပြောဟောရေးသား ချို့ယွင်းမှားက ပါယ်လား အောက်ရွာ ဆင်းတတ် ပါသည်၊ ပညာရှိလို ဟောပြော ဆို၍ လွဲပို စာရေး ညွှန်ပြပေးသော ၀န်လေး ပါဘိ ထိုအသိနှင့် သတိလမ်း ပြင်နေပါသည်။ **သတိလမ်း ပြင်နေပါသည်**
၀ီရိယထူ လုံ့ လကူ၍
သူမတူအောင် ကြိုးစားရစမြဲ ပါ။